ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံသူ | dawnmanhon
မြန်မာနိုင်ငံ၏ One Lady Show ပွဲကို အောင်မြင်စွာဖျော်ဖြေခဲ့သူ ''တစစီကျိုးပဲ့နေတယ်'' သီချင်းဖြင့် လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်ခဲ့သည့် အဆိုတော်အေးချမ်းမေသည် ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ခေတ္တပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့သည်။ ''ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံ''၊ ''JV 1500 ''၊ ''တို့မဝေးဘူး'' တေးစီးရီးများနှင့် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည့် အေးချမ်းမေသည် မြန်မာနိုင်ငံဂီတလောကမှ ၁၉၉၇ တွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျောက်ကွယ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိအနှစ် ၂၀ ခန့်အကြာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သူမ၏ပရိသတ်ထံ သူမ၏ သီချင်းများဖြင့် ပြန်လည်ဖျော်ဖြေရန် ရောက်ရှိနေခဲ့သည်။ အေးချမ်းမေသည် လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် ပြည်သူ့ဥယျဉ်တွင် Plus Three Band နှင့် One Lady Show ပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်၌ မန္တလေးမြို့တွင် အဆိုတော်စည်သူလွင်နှင့်အတူ ဖျော်ဖြေသွားမည်ဖြစ်သည်။ အေးချမ်းမေ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ၁၉၉၅ ဇန်န၀ါရီထုတ် ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ ရသစုံမဂ္ဂဇင်းနှင့် သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့သည်များကို အေးချမ်းမေ၏ ပရိသတ်များ အတွက် အမှတ်တရ ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
တေးစီးရီးလောကမှာ အရှိန်အဟုန်ကြီးစွာနဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိလာသူကတော့ အခုတလော အားလုံးရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ အေးချမ်း မေပါပဲ။ အေးချမ်းမေရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ အံ့သြစရာကောင်းအောင် အရှိန်အဟုန်ကြီးတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ စီးရီးခွေလောကမှာ တခွေကို ၂၀၀ိ နဲ့ ရောင်းမလောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ ''ဆေးဆိုးပန်းရိုက် မျက်နှာ''ပြီးတော့ အေးချမ်းမေရဲ့ ''ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံ''က ထပ်ပြီး ဈေးနှုန်းစံချိန်သစ်တင်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ ခုတလော မိန်းကလေးအဆိုရှင်တွေရဲ့ စီးရီးတွေထွက်လာရင် ထင်သလောက်ဖြစ်မလာ။ မိန်းကလေးအဆိုရှင်တွေကဏ္ဍဟာ မှိန်သလို ဖြစ်နေလို့ မိန်းကလေးအဆိုရှင်ခေတ်များ ကုန်တော့မလားဆိုပြီး တွေးမိနေကြတာ။ ဟော ခုအေးချမ်းမေဟာ မိန်းကလေးအဆိုသမား စီးရီးခွေထဲမှာ အထူးအောင်မြင်မှုရသွားတယ်။
ပရိသတ်များ အထူးသိချင်နေကြတဲ့ အေးချမ်းမေရဲ့အကြောင်းအရာတွေရရှိဖို့အတွက် ကျွန်တော်က ဒီစီးရီးခွေကို ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးတဲ့အင်အားထဲက အဓိကတယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းချစ်သူနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ အပူတပြင်း ရှာရပါတယ်။ မျက်နှာဖုံးပုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တွေ့ကြတဲ့ နောက်ပိုင်း မင်းချစ်သူနဲ့ ကျွန်တော် မတွေ့ရ။ သူကလည်း သူ့အလုပ်နှင့်သူ၊ ကျွန်တော်ကလည်း မျက်နှာဖုံးပုံ ကောင်းမွန်သေသပ်လှပဖို့ ပန်းချီဆရာဆီပြေး ရ၊ ကာလာခွဲတဲ့နေရာပြေးရနှင့် အလုပ်များနေခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် အေးချမ်းမေ အင်တာဗျူးကိစ္စလုပ်ဖို့ကို မင်းချစ်သူဆီ အပူတပြင်းလိုက်ရှာပါဟု ကိုလှကျော်နေကို အကူအညီတောင်းခဲ့ရပါတယ်။ ကိုလှကျော်နေနှင့် မင်းချစ်သူကလည်း ကိုယ့်အလုပ်နှင့်ကိုယ်ရှုပ်နေပြီး တယောက်နှင့်တယောက် မတွေ့ကြ။ ဒီအချိန်မှာပဲ ဓာတ်ပုံဆရာ မော်နီကျော် ရောက်လာခဲ့တယ်။ သူက အေးချမ်းမေရဲ့ မွေးနေ့ပွဲက ပြန်လာတာ။ ဓာတ်ပုံတွေ လည်း ရိုက်ထားတယ်။ အဖုံးလုပ်ထားရင် အတွင်းမှာအင်တာဗျူးအတွက် ဘာလုပ်ထားပြီလဲလို့ မေးပါတယ်။ ကျွန်တော် အကူအညီလိုတုန်း မော်နီကျော်နှင့်တွေ့လိုက်ရလို့ အထူးဝမ်းသာသွားခဲ့ရတယ်။ မေးခွန်းတွေရေးပြီး မော်နီကျော်ကိုပဲ ကူညီမေးပေးပါ။ သူ့ပရိုဂျူဆာကိုလည်း မေးခွန်းတွေ အမြန်ဖြေပေးဖို့ အေးချမ်းမေကို အကူအညီတောင်းပေးပါလို့ သူကတဆင့် တိုက်တွန်းရတယ်။ မဂ္ဂဇင်းဖောင်ပိတ်ခါနီး စောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့ အကြောင်း မော်နီကျော်ကိုပြောတဲ့သူနှင့်အတူ ရန်ကင်း T.Point Store က စိုးမင်းဦးပါ အေးချမ်းမေ အင်တာဗျူးအတွက် အားတက်သရော ကူညီခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အမေးနဲ့ အေးချမ်းမေရဲ့အဖြေအတွက် ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေး-နာမည်ရင်း၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသက်နဲ့ မွေးဖွားရာဇာတိကို ပြောပြပါ။
ဖြေ-နော်လယ်ထူးပါ။ ကရင်လူမျိုး၊ ခရစ်ယာန်၊ ၂၇-၁၁-၉၄ မှာ အသက် ၂၀ ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ မွေးဖွားရာဇာတိကတော့ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ပါ။
ဖြေ-အရင်က နော်လယ်ထူးဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ဘုရားသီချင်းခွေတော်တော်များများကို ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီနာမည်နဲ့ပဲ ဘုရားသီချင်းခွေတွေဆိုဖို့ ရည်ရွယ် ထားခဲ့ပါတယ်။ အေးချမ်းမေဆိုတဲ့ နာမည်ကို ဆရာမင်းသိင်္ခက မအား မလပ်တဲ့ကြားက ဒီနာမည်လေးကို ရွေးပေးခဲ့တာပါ။ ဒီနာမည်ကို ရွေးပေးခဲ့တဲ့ ဆရာမင်းသိင်္ခကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
မေး-တေးစီးရီးခွေမထွက်ခင် အရင်ဂီတလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြောပြပါဦး။
ဖြေ-စီးရီးမထွက်ခင် အရင်က ဘုရားသီချင်းခွေတွေကို ဆိုပါတယ်။ နောက်ပြီး Kenosis ဆိုတဲ့ အဖွဲ့နာမည်နဲ့အပြင် သီချင်းခွေတွေမှာ Harmony လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ စုံတွဲသီချင်းတပုဒ်ကို ရဲရင့်ရဲစီးရီးခွေထဲမှာ သူနဲ့အတူ တွဲဖက်ပြီး ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မေး-မိဘမောင်နှမတွေအကြောင်းပြောပါဦး။ သူတို့ကရော ဂီတကိုချစ်သလား။
ဖြေ-အဖေကတော့ ဂီတအနုပညာကို အရမ်းလေးစားတယ်။ သူငယ်ငယ်ကလည်း ဘုရားသီချင်းတွေ တော်တော်များများကို ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အမေကတော့ မရှိတော့ပါဘူး။ မနှစ်ကပဲ ဘုရားသခင်ရဲ့ ခေါ်တော်မူခြင်း ကို ခံခဲ့ရပြီးပါပြီ။ မောင်နှမကတော့ ၅ ယောက်ရှိပါတယ်။ မောင်နှမတွေထဲမှာ အစ်ကိုအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Stone ကိုတော့ နာမည်ရင်းနှီးပြီးသား ရှိကြတယ် ထင်ပါတယ်။ အခုစီးရီးမှာလည်း အစ်ကိုရေးတဲ့ သီချင်းတွေပါပါတယ်။
ဖြေ-တိုက်ဆိုင်လာပုံက . . .
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ကိုစောရန်နိုင်က ကျွန်မရဲ့အသံကို ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့် စီးရီးထုတ်ပေးဖို့ စကားကမ်းလှမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကိုမင်းချစ်သူ၊ ကိုဇော်မျိုးထွဋ်တို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီး 'ပျော်ရွှင်ခြင်း နိုင်ငံ'ဆိုတဲ့ စီးရီးလေးနဲ့ အစပြုခဲ့ကြပါတယ်။
မေး-အေးချမ်းမေရဲ့ အရင်က ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ စတီရီယိုတေးသံရှင် အမျိုးသမီးတွေထဲမှာ ဘယ်သူ့ကိုအားကျမိသလဲ။ ဘယ်သူ့ကို နှစ်သက်မိသလဲ။
ဖြေ-အရင်ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ တေးသံရှင်အားလုံးကို လေးစားနှစ်သက်မိပါတယ်။
မေး-ဂီတကို ဘယ်အရွယ်ကတည်းက လေ့လာလိုက်စားခဲ့ပါသလဲ။
ဖြေ-ဂီတကို (၁၈)နှစ်အရွယ်ကစပြီး လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
မေး-အခုအခွေထွက်ပြီး ပရိသတ်တုံ့ပြန်မှုကိုရတော့ ဘယ်လိုခံစား ရသလဲ။
ဖြေ-မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ပရိသတ်ရဲ့ နှစ်သက်အားပေးတုံ့ပြန်မှုကိုရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
မေး-ဒီအခွေမှာ သီချင်းစာသား။ အဆို၊ အသံဖမ်း၊ ဖြန့်ချိမှုအားလုံး ကို အေးချမ်းမေအနေနဲ့ အားရကျေနပ်မှုရှိပါသလား။
ဖြေ-ဟုတ်ကဲ့၊ အားလုံးပါပဲ အားရကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ အဆိုအနေနဲ့ကတော့ ဆက်လက်ပြီး ကြိုးစားနေပါတယ်။
မေး-အချို့ဟာ စတီရီယို တေးသံရှင်အဖြစ် အောင်မြင်လာရင် ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်အဖြစ် ကူးပြောင်းတတ်ကြတယ်။ အေးချမ်းမေကကော အဲဒီလိုပြောင်းဖို့ စိတ်ကူးရှိလား။
ဖြေ-ကျွန်မကတော့ သီချင်းအဆိုရှင်ပဲ ဆက်လက်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
ဖြေ-စီးရီးထွက်ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ မယုံနိုင်လောက်အောင် အားပေး လက်ခံခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်များအတွက် ကျွန်မဆက်လက်ပြီး ကြိုးစားသွားပါ့မယ်လို့ . . . ။